Magacaabista Safiirrada Iyo Ololaha Doorashada (Warbixin) – Great Banaadir
Golaha Wasiirada ayaa la filayay inay maalmaha soo socda ansixiyaan Safiirradii ugu badnaa ee abid halmar la wada magacaabo, Safiiradan oo tiradoodu gaarayso illaa 15 Safiir ayaa ansixintooda dib loo dhigay todobaadkii hore kadib muran ka yimid awood qeybsiga beelaha Soomaaliyeed ee afar beelood iyo bar (4.5).
Safiirradan ayaa la filayaa in loo magacaabi doono dalalka Sudan, Hindiya, Kenya, South Sudan, Ruushka, Biljamka, Pakistan, Uganda, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo kuwa kale, waxa ayna barabixin doonaan safiirro kale oo hadda magacaaban.
Madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu horay ugu magacaabay Salaad Cali Jeelle Safiirka dalka Jabuuti, halka Yuusuf Garaad Cumar loo magacaabay Ergeyga Gaarka ah ee Geeska Afrika, Badda Cas iyo Gacanka Cadmeed, dhinaca kale waxaa jira Safiirro ay hore u ansixiyeen Golaha Wasiirrada oo ay soo diideen dalalkii loo magacaabay halka kuwa kalena aan weli lagu qorin safaarrado.
Danjirayaashan ayaa u badan Siyaasiyiin aan hore uga tirsanayn Wasaaradda Arrimaha Dibedda oo ku yimid magacaabid siyaasadeed, kuwaas oo si weyn ugu dhowaa Madaxweyne Farmaajo.
Falanqeeyeyaasha siyaasadda ayaa u arka in magacaabistan ay la xiriirto ololaha dib-u-soo noqoshada Madaxweyne Farmaajo, iyaga oo sidoo kale ku tilmaamay in ay ka hor imaanayso qodobka 11-aad ee Sharciga Shaqaalaha Arrimaha Dibedda ee uu Ansixiyey Baarlamaanka 2013, kaas oo ku koobaya tirada danjirayaasha ku imaanaya Magacaabista Siyaasadeed in aysan ka badan karin 10% Danjirayaasha magacaaban.
Waxaa kale oo xusid mudan in magacaabista diblomaasiyiintan aysan ku jirin miisaaniyad sanadeedka loo ansixiyey xukuumadan taas oo ku keenaysa dib u dhac howlgelinta safiiradan.
Muddo xileedka Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa ka harsan dhowr iyo labaatan cisho, waxaana la rumeysan yahay waxa xilligan loo sameynayo in Safiiro intaas la eg la magacaabo ay tahay olole doorasho.
Xigasho: Jowhar News
UN opens office for counter-terrorism and training in Africa
Roads closed, security forces deployed ahead of parliament meeting in Mogadishu
Senior Sudanese army general inspects troops on border with Ethiopia